Armodafinil vs Modafinil: Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato [Hagaha Isticmaalaha Buuxa]
Modafinil ama Armodafinil ma ugafiican tahay dadka danaynaya inay xoojiyaan awooddooda garasho? Daraasaduhu waxay muujiyeen in qiyaasta wax ku oolka ah ee Armodafinil ay tahay qiyaastii kalabar Modafinil. Laakiin, maxay taasi uga dhigan tahay isticmaaleyaasha? Awoodda iyo awoodda kordhay miyey tarjumaysaa horumar daran oo xagga tamarta, diiradda, iyo wax soo saar ah? Tani waa su'aal in dawooyin badan oo caqli badan laga yaabo in ay ku qancinayaan raadintooda daroogada caqliga fiican.
Xilligan iyo xilligan, jawiga ganacsiga adduunka ee xawaaraha ku socda, waxaa ka muhiimsan sidii hore in aad feejignaato, feejignaato, oo aad feejignaato markasta oo aad shaqada ku jirto. Xitaa haddii aad kaliya dhigato kuleejka, waa tartan ka badan sidii hore. Waxaa jira waxyaabo badan oo khatar ku jira, oo haysashada geestaas yar ee dheeriga ah waxay macnaheedu noqon kartaa farqiga u dhexeeya guusha iyo guuldarada. Adduunkan aadka isugu xiran ee waxsoosaarka leh, maskaxdeennu waxay leedahay waqti yar oo ay ku nasato oo ay dib ugu cusbooneysiiso. Waxay u badan tahay inay lagama maarmaan u tahay sidii hore in la qaato Modafinil ama Armodafinil midkood haddii aad dhibaato daran ku qabto feejignaanta, isku soo ururinta, ama dhiirigelinta.
Modafinil wuxuu ku sii kordhayay caan ka mid ah faa'iidooyinka ganacsiga, cayaartoyda adkeysiga, iyo ardayda si isku mid ah. In kasta oo Modafinil si aad ah loo yaqaan, Armodafinil waa ka yar-yaqaan 'inaadeer qabow' ee Modafinil.
Armodafinil ma ka fiicnaadaa Modafinil? Armodafinil waxaa loo sameeyay si sax ah maadama Modafinil shatigiisa uu dhacayay. Tani waa mid aad ugu badan warshadaha. Armodafinil dhab ahaantii waxaa laga soo qaatay Modafinil.
Labadan daroogoba waa walxo dhiirrigeliya soo kicinta daawada. Iyo, labadaba daroogooyinkaan waxaa si isdaba joog ah loogu adeegsadaa in lagu kordhiyo feejignaanta, waxsoosaarka, iyo dhiirigelinta.
Modafinil wuxuu leeyahay ku dhowaad 200 daraasad caafimaad oo ka timid sanadihii 10 ee la soo dhaafay si uu u taageero waxtarkiisa, nabadgelyadiisa, iyo waxtarkiisa la xaqiijiyay.
Xogta caafimaad waxay soo jeedinaysaa in Armodafinil uu ka xoog badan yahay Modafinil.
Weli, shirkadaha dawooyinka, dhakhaatiirta, iyo cilmi baarayaasha caafimaad ma oga wax kasta oo daawooyinkani maskaxda ka qabtaan. Had iyo jeer taxaddar marka aad qaadanaysid daroogooyinka cusub ee casriga ah.